I-K-Tek inemishini esezingeni eliphakeme yokukunikeza ngezinsizakalo ezahlukahlukene ze-CNC machining, kufaka phakathi ukugaya, ukujika, i-EDM, ukusika izintambo, ukugaya indawo nokuningi. Sisebenzisa amazwe 3, 4 no-5-eksisi CNC machining izikhungo ukukunikeza ngokunemba okukhulu, nezimo emangalisayo, futhi okukhipha ehloniphekile cishe kunoma iyiphi iphrojekthi machining. Asinawo kuphela imishini ehlukene, kodwa futhi neqembu lochwepheshe, abazibophezele ukukunikeza insizakalo esezingeni eliphezulu e-China. Omakhenikha bethu abanekhono bangasebenzisa izinto ezahlukahlukene zepulasitiki nezensimbi ukukhiqiza izingxenye zokujika nezokugaya.
Siyakuqinisekisa ukuthi noma ngabe ubukhulu bomsebenzi bunjani, ochwepheshe bethu bawuthatha sengathi ngowabo. Singahlinzeka futhi ngosizo lwe-CNC machining services oluzokusiza ekutholeni isithombe esicacile somkhiqizo wokugcina.
I-K-Tek ekhethekile ekucutshungulweni kwezingxenye zemishini. Izinsizakalo Ezihlanganisiwe Ezikhethekile zihloniphe ubuchwepheshe nezinqubo zakhona. Onjiniyela bethu bazosebenza nawe ukuqinisekisa izinga eliphezulu lokuklama lokukhiqiza nokuhlangana. Ukuhlinzekelwa kahle kwamakhasimende nokwaneliseka kuyizimpawu zenkampani yethu futhi kuyisisekelo sempumelelo yebhizinisi lethu.
Ngesikhathi esifanele -Siyaqonda ukuthi ezinye izingxenye zomsebenzi wethu zinosuku olubekiwe oluphuthumayo, futhi sinamakhono nezinqubo zokuqinisekisa ukuthi siletha ngesikhathi ngaphandle kokuyekethisa izinga lomsebenzi esiwenzayo.
Okuhlangenwe nakho -Besilokhu sihlinzeka ngezinsizakalo ze-CNC zokugaya iminyaka engaphezu kwengu-10. Sihlanganise izinhlobo ezahlukahlukene zemishini yokugaya esezingeni eliphakeme yezinqubo ezahlukahlukene futhi sineqembu elinolwazi lonjiniyela nabasebenza ukuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kuwo wonke amakhasimende ethu.
Amandla - Ngokuhlukahluka kwemishini yethu, siyakwazi ukuqinisekisa ukunemba kwazo zonke izinto ngazo zonke osayizi.
Ukukhiqizwa Kwevolumu Ephansi - Ukukhiqiza ngamanani aphansi yisixazululo esihle sokuphatha uhlu lwakho nokuhlola imakethe ngaphambi kokukhiqiza amanani amakhulu. Ukukhetha Ukukhiqizwa Kwezinga Eliphansi kungukukhetha kwakho okuhle.
Precision Milling Futhi ngokuyikho CNC Systems
Ngokuphakela kwethu okupholisayo, singakwazi ukusika izinto ngokushesha kunezinhlelo zokupholisa ezijwayelekile, kanye ne-CAD / CAM, UG ne-Pro / e yethu, i-3D Max. ingasebenzisana kahle kakhulu namakhasimende ngobuchwepheshe futhi isheshise kakhulu inqubo yonke futhi ikunikeze imikhiqizo esebenza kahle kakhulu. Izikhungo zethu ezimbili zokugaya ze-CNC zifaka ama-knuckles okuzenzakalelayo asivumela ukuthi sishintshe kunoma iyiphi i-engeli. Ngokubambisana nokusetshenziswa kwamathuluzi ayindilinga, lokhu kusivumela ukufeza i-geometry eyinkimbinkimbi efanayo njenganoma imuphi umshini wama-eksisi amahlanu.
Izici CNC yethu Turning
1.CNC lathe design CAD, kwesakhiwo design modularization
2. Ijubane eliphezulu, ukucacisa okuphezulu nokuthembeka okuphezulu
3. Yize impahla yokuqala ivame ukuba yindilinga, ingaba ezinye izinhlobo, ezifana nesikwele noma iheksagoni. Umucu ngamunye nosayizi kungadinga "isiqeshana" esithile (uhlobo olungaphansi kwekholomu - okwakha ikhola ezungeze into).
4. Ubude bebha buyahluka ngokuya nge-feeder yebha.
5. Amathuluzi we-CNC lathes noma izikhungo zokujika zifakwe ku-turret elawulwa ikhompyutha.
6. Gwema ukwakheka okunzima njengezakhiwo ezinde ezinde
Izinto ezahlukahlukene esisebenza nazo zifaka, kepha azikhawulelwanga ku:
Izinto zokwakha Amapulasitiki
Insimbi engagqwali Titanium UDelrin Ulunguze
Ithusi Inconel I-Polypropylene Lexan
I-Aluminium Hastelloy UHMW I-Acrylic
Ithusi Super Duplex I-PVC Ama-Phenolics
Insimbi ebandayo ebandayo Ithusi I-Acetal I-Teflon
Ingxubevange ye-Nickel Ama-Monels I-PVC PTFE
I-Carbon Fibre Zonke Ingxubevange Izinsimbi Inayiloni POM
Ukwelashwa Kwama-Mechanical Surface Ukuqhumisa isihlabathi, ukuqhumisa i-Shot, ukugaya, ukugingqa, ukupholisha, ukuxubha, ukusakaza, ukudweba, ukudweba uwoyela njll.
Ukwelashwa Kwe-Chemical Surface I-Bluing ne-Blackening, i-Phosphating, i-Pickling, i-Electroless Plating yezinsimbi ezahlukahlukene nama-Alloys njll.
Ukwelashwa Kwe-Electrochemical Surface Anodic namachibi, Electrochemical wokucwebezelisa, Electroplating njll
Ukwelashwa Kwendawo Yesimanjemanje I-CVD, i-PVD, ukufakwa kwe-Ion, i-Plating ye-Ion, i-Laser Surface Treatment ect.
Ukuqhumisa isihlabathi Ukuqhuma kwesihlabathi esomile, ukuqhumisa isihlabathi esimanzi, ukuqhumisa isihlabathi esinesihlabathi njll.
Ukufafaza Sishaye Electrostatic, Fame sishaye, Powder sishaye, Plastic sishaye, Plasma sishaye
Ukuqhafaza Ukufakwa kwe-Copper, i-Chromium Plating, i-Zinc Plating, i-Nickel Plating